Ulo oru ahia ahia 10 ka ha weghachite ahia ahia | Martech Zone
10 Social Commerce Sites ka mbanye Nchekwa okporo ụzọ
Monday, October 28, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe a bịara n'ịkwọ ụgbọ ala, enwere ọtụtụ saịtị na ọrụ dịlarị nke ndị na-ege ntị nke ị na-achọ iru. Ekwenyesiri m ike na ị nụlarị banyere ụfọdụ nnukwu saịtị azụmahịa dị ka Groupon na Living Social - mana enwere ọtụtụ ndị toro na ewu ewu. Somefọdụ na-akọwapụta ihe dị iche iche dị oke ọnụ, ma ọ bụ ezubere iche maka ndị nne, ndị ọzọ na-anwa ịchọta ihe ọzọ dị mma na obodo gị. Nhọrọ nke nhọrọ na akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ onyinye a bụ ihe na-eme ka ndị na-ege ha rie ha ma na-enyere ha aka ịgbasa.
Maka ndị na-ere ahịa na-achọ ịchụpụ okporo ụzọ mpaghara, ha nwere ike ịbụ ohere zuru oke maka gị ịkwọ ụgbọala ahịa, ahịa ịntanetị - ọkachasị visibiliti n'ime mpaghara gị. Lee ihe atụ iri na abụọ nke saịtị ụfọdụ. You nwere karịa? Kekọrịta ha na azịza yana nsonaazụ nke ị nwetaworo site na ha. Buru n'uche na ọtụtụ n'ime ihe ndị a bụ ohere nnweta ebe ị na-ebelata ọrụ gị naanị iji kwalite okporo ụzọ.
Fab.com - you a mmebe, soplaya ma ọ bụ emeputa nke oké imewe?
Na-ekpuchi awade otu irresistible obodo ndibiat kwa ụbọchị. Enwekwara ike inye ha ego ha depụtara aha ha.
Obodo Gilt bụ ụzọ ndụ ntanetị na-aga n'ịchịkwa ahụmịhe kachasị mma na obodo kachasị n'ụwa. Anyị na-enye onyinye a na-ekewaghị ekewa, otu n'ụdị-gụnyere iri nri, ntụrụndụ, ịma mma na ọdịmma-na ndepụta ndị otu anyị na-eto eto.
Groupon na-ejikọ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa site na ọnụahịa na nchọpụta. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ndenye ọpụpụ Echekwa - otu ụlọ ọrụ Groupon.
Ibi Ndụ na-enyere ndị azụmaahịa obodo aka ịchọta ma debekwu ndị ahịa.
Mpaghara Plum bụ usoro e-commerce na ngwongwo mgbasa ozi gbadoro anya na ndị nne na mkpa ha.
Polyvore bu ikpochaputa ihe na ihe ichoputara. Ndị otu na-egbutu ngwaahịa na onyonyo nzụlite site na Clipper Tool ma ọ bụ Polyvore Button. Ihe onyonyo ndị a dị na Polyvore maka ihe okike na nchọta onye ọrụ.
Onyeka jikọtara ndị na-azụ ahịa na ngwongwo kachasị mma yana akụkọ na ọhụụ nke mere ka ihe ndị ahụ dịrị ndụ.
Onye na-eme obi ụtọ - Kwa izu ụka, Thrillist na-agbada ndị debanyere aha ya ga-enwerịrị nkwanye, site na nke kachasị mma nke ọhụụ, na ịdị mma nke ọma na radar. Ga-abụrịrị iche pụrụ iche ka ewepụtara gị - mana ọ ga-efu mgbalị! Nke a bụ ezigbo ihe atụ:
Plọ ahịa gị Abù - Gakwuru ndị na-ege ntị buru ibu ma dọta ndị ahịa ọhụrụ site na ịre ahịa oge na-aga ịkwaga ngwongwo karịrị ma jupụta oge atọrọ!
Tags: eversavefabfab.comihiegoogle na-enyegrouponndụ mmadụplum districtPolyvorescoutmobobi ụtọnnabata
Akwụkwọ ahia ahia vidiyo
MarketSnare: Nzipụta mpaghara maka International Enterprise